Ku Xadgudubka Maandooriyaha - Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc.
Noloshaada Dib Ulaabo!
"Aqallafsanaantu waa mid la daaweyn karo, cudur caafimaad oo daba-dheeraada oo ku lug leh is-dhexgal adag oo ka dhex yimaada wareegyada maskaxda, hiddo-wadaha, bay'ada, iyo waayaha shaqsiyadeed ee nolosha. Dadka qabatimay qabatinka waxay isticmaalaan mukhaadaraad ama waxay ku kacaan dabeecado noqda kuwa qasab badanaaba sii wada in kasta oo cawaaqib xumo ay leedahay Dadaallada ka-hortagga iyo hababka daaweynta ee balwadda ayaa guud ahaan u guuleysta sida kuwa cudurada kale ee daba dheeraada. "
- Bulshada Mareykanka ee Daawada Maandooriyaha (ASAM) Qeexitaanka Maandooriyaha
Community Health Service Inc. (CHSI) waxay siineysaa daaweynta cilladaha isticmaalka maandooriyaha shaqsi ahaaneed daawooyinka sida Suboxone ama Vivitrol goob xukun la'aan, bukaan socod eegto. Barnaamijka waxaa badanaa loo yaqaan 'MAT' (Daaweyn lagu caawiyo daaweynta). Daawaynta ay dawadu caawiso waxay isku daraysaa daawooyinka ay ansixisay FDA, sida buprenorphine iyo naltrexone, oo leh adeegyo dhaqan. Ma jiro ugu badnaan muddada lagu taliyay ee daaweynta, iyo bukaannada qaarkood, daaweyntu way sii socon kartaa si aan xad lahayn. MAT waa ikhtiyaarka daaweynta kaliya ee lagu muujiyey cilmi baaris si waxtar ugu yeesho xanuunka isticmaalka opioid (OUD).
Waa inaad rajeyneysaa in lagula dhaqmo naxariis, xushmad, dulqaad iyo faham. Waxaan ku dadaalnaa inaan caawino bukaan kasta oo noo yimaada daaweyn, iyadoon loo eegin heerka caymiska. Waxaan aqbalnaa noocyada caymiska badankood, oo ay kujiraan Medicaid iyo Medicare. Fursadaha kale waxaa ka mid ah kaalmada dhaqaale iyo qorshooyinka lacag-bixinta. Adeegyada MAT ayaa laga heli karaa goobaha Grafton, ND iyo Moorhead, MN. Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah ama inaad ballan qabsato, fadlan soo wac (Grafton 701-352-4048, Moorhead 218-236-6502).
"Daaweynta ku-daweynta-daaweynta ee ay weheliso daaweyn nafsaani-bulsho iyo taageerooyinka soo kabashada ee ku saleysan bulshada ayaa ah heerka dahabka ee lagu daaweynayo qabatinka opioid. "
- Dhakhtarka guud ee qalliinka Mareykanka
La xiriir Grafton ama Moorhead Clinic